သံစဉ်မဲ့ အလင်္ကာများ: သောကြာကြယ် - ၂
စာရေးသူ--> တပြည်သူ အိမ့်ချမ်းမြေ့ (စာတင်ချိန်) 11:27 PM
ဒီပို့စ်လေးကို ဖတ်နေရင်း တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက် သိပ်ချစ်ကြတဲ့ မိသားစုလေးတစ်စုပုံ ပေါ်လာတယ်. ရိုးသားဖြောင့်မတ်တဲ့ ဖေဖေ၊ အခွင့်အရေးမယူတတ်တဲ့ ဖေဖေ၊ သားသမီးတွေကို ဂရုစိုက်ပြီး လုပ်သင့်လုပ်ထိုက်တာကို လုပ်ဖို့ ဆုံးဖြတ်ရဲတဲ့ဖေဖေ… အဲလို အရည်အချင်းတွေနဲ့ ပြည့်စုံတဲ့ ဖခင်ကောင်းတစ်ယောက်ရဲ့ အရည်အချင်းတွေကို မြင်နေရတယ်.
တကယ်လို့ ဒီဇာတ်လမ်းလေးဟာ fiction တစ်ခုမဟုတ်ဘဲ reality တစ်ခု ဖြစ်ခဲ့မယ် ဆိုရင်တော့ ထူးမရဲ့ ဖေဖေဟာ ယောင်္ကျားကောင်းတစ်ယောက်၊ ခင်ပွန်းကောင်းတစ်ယောက်၊ ဖခင်ကောင်းတစ်ယောက်ပါလို့ ပြောချင်ပါတယ်.
ထူးမဟာလည်း ဘ၀ကို ဒီတိုင်းနေသွားတာထက် လေ့လာစမ်းသပ်မှုတွေနဲ့ နေရတာ၊ လက်တွေ့ဆန်ဆန် ဘ၀ကို တည်ဆောက်ရတာ၊ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ယုံကြည်ချက် အပြည့်ရှိတာ၊ မိသားစုကို သံယောဇဉ်တွယ်တာတာ စတဲ့ လူသားဆန်တဲ့ လူပီသတဲ့ လူသားတစ်ယောက်ပါပဲ.
နောက်ဆက်မယ့် ဇာတ်လမ်းလေးတွေကို မျှော်နေပါတယ်.
တိုက်ဆိုင်လွန်းစွာပဲ ကျွန်တော်လည်း ကစ္ဆပနဒီအလွမ်းပြေ ဇာတ်လမ်းတစ်ပုဒ်ရေးနေတာ. ခုတော့ ဇာတ်အိမ်တစ်ခု ပိုခိုင်မာသွားခဲ့တာပေါ့လေ.
တိုက်ဆိုင်လွန်းစွာပဲ ကျွန်တော်လည်း အိမ်နားက နွားကြီးပေါင်ကျိုးတဲ့ အကြောင်းဇာတ်လမ်းတစ်ပုဒ်ရေးနေတာ. ခုတော့ ဇာတ်အိမ်တစ်ခု ပိုခိုင်မာသွားခဲ့တာပေါ့လေ ....
(ဆိုင်မယ်ထင်တယ် နော် အဲဒီနွားကြီးရဲ့ ဇာတိက ဘင်္ဂလာဒေ့ က မောင်တော ကနေလှည့်ဝင်လာတာတဲ့)
မသိလို့said...
Reality မဟုတ်ပဲ Fiction ဆိုရင်ရော ထူးမဖေဖေ က ဘာဖြစ်မှာတုန်း ငါ့ကောင်ကြီးရ
မလေးရေ .. ဆက်ရေးပါဦး